Centerpartiet:qaxootiga hoy ayaga ha raadsadaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Centerpartiet:qaxootiga hoy ayaga ha raadsadaan
La daabacay fredag 13 november 2015 kl 16.10
Xisbiga Centerpartiet ayaa ah xisbiga keliya ee ka soo horjeeda kontoroolka xaduudaha dalka.
Xisbiga ayaa imminka soo jeediyey hindise talo oo lagu maareyn karo culuyska ka dhashay qulqulka qaxootiga. Xisbiga ayaa doonaya in hey’adda Migrationsverket joojiso hoy u raadinta dadka magangeliyo doonka ah. Baddelkeeda xisbiga waxuu rabaa in qaxootiga Sweden raadsadaan guryahii ay degi lahaayeen, laguna caawiyo keliya qarash ay iskaga bixiyaan kirada guryaha.
– Arrintan waxay la xiriirtaa in maanta hey’adda Migrationsverket aysan heynin guryo ku filan oo la dejiyo qaxootiga waddanka ku soo qulqula. Sidaas daraadeed way qumantahay in magangeliyo doonka la saaro masuuliyadda ah in ay iyaga hoy iyo halkii ay degi lahaayeen raadsadaan, sidaas waxaa yeri Anders W Jonsson oo ah siihayaha hoggaanka xisbiga Centerpartiet.
Sharuuddan ah in qaxootiga ayaga guryo raadsadan xisbiga Centern waxuu doonaya in laga dhaafo keliya dadyow ildaran, sida reeraha caruurta wata iyo waayeelka. Xisbiga ayaa aaminsan haddii magangeliyo doonka lagu wareeyo masuuliyadda guryo raadsiga ay markas hey’adda Migrationsverket u helayso waqti ay ku maareyso kiisaska magangeliyo doon ee soo gaaraya. Xisbiga ayaa ku taliyey in qof qaxootiga ah ee
– Dadkan qaxootiga ah waa dad firfircoon oo soo jeexay baddaha iyo waddamo badan, marka shaki kumo jiri in hoy iyo guryo raadssan karaan, ayuu yeri Anders W Jonsson
Maxaa dhacaya haddii guryo keensan waayaan?
– Sweden kama jirto damaanad ah qof kasta in uu heysto meel uu madaxa la galo. Ruuxa guri la’aan ku dhacdo ma jirto damaanad ah in la siiyo hoy. Xaaladda Sweden sidaas weeyaan, kuwo waddanka imaanaya wax la midyahiin dadka kale, ayuu yeri.